09/11/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hampiaraka talenta ny Tandem
Tarika izay hiarahana mpanakanto samy manana ny lazany ny Tandem. Hampiaraka talenta etsy amin’ny Piment Café Behoririka izy ireo anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Hivelatra amin’ny karazan-kira sy gadona samihafa ny seho atolotr’izy ireo amin’izany. Hiara-dia ao anatin’izany Tandem izany ry Naina, Nini Rabaroel, La Manitra, Eric Rakotoary, Titi Razakamiadana ary Samy Andriamanoro.
Fara West – Faravohitra
Silo sy Dina MIalinelina
Taorian’ny seho nentiny nanamarika ny tsingerin-taona nahaterahany, manohy hatrany ny fiakarana an-tsehatra i Silo. Rahampitso, etsy amin’ny Fara West Faravohitra dia hiray sehatra amin’i Dina Mialinelina izy. Mpanakanto roa samy manana ny talentany nefa tsy mitovy aingam-panahy raha ny taona niainana nefa samy hiezaka ny haneho seho miavaka.
CC Esca Antanime
« Mila midera » miaraka amin’ny AJC
Seho iray fanaon’izy ireo isan-taona. Hotanterahina ny alahady izao manomboka amin’ny 2 ora tolakandro etsy amin’ny CCEsca Antanimena ny « Mila midera » iarahana amin’ny AJC. Arakan y mahazatra azy ireo, dia ireo hira fiderana amin’ny gadona samihafa toy ny Pop, ny Gospel… no atolotr’izy ireo hankoako etsy Antanimena. Hisy ihany koa anefa ny vahiny nasain’izy ireo hitondra ny anjara birikiny amin’io seho io.